အပျေါပိုငျးဗလာကငျြး အမြိုးသမီးမြား၏ လုပျငနျးခှငျ – SOCIAL KHIT NEWS
အပျေါပိုငျးဗလာကငျြး အမြိုးသမီးမြား၏ လုပျငနျးခှငျ
အငျးဝ တဈဖကျကမျးမှ အပျေါပိုငျးဗလာကငျြး အမြိုးသမီးမြား၏ လုပျငနျးခှငျ
မွနျမာနိုငျငံ အထကျပိုငျး ရှေးမွနျမာ မငျးဆကျမြား၏ မငျးနပွေညျတျော အငျးဝမွို့ဟောငျး တဈဖကျကမျး ဧရာဝတီ မွဈကမျးဘေးတှငျ အမြိုးသမီးမြား အထကျပိုငျး ဗလာကငျြးဖွငျ့ လုပျကိုငျကွသညျ့ လုပျငနျးခှငျ တဈခု ရှိနသေညျ။
ထိုရှာမှ ဧရာဝတီမွဈကို ဖွတျကြျော၍ လှမျးကွညျ့လိုကျသျော နိုငျငံခွားသားမြား လာရောကျ လလေ့ာရာ အငျးဝဘကျကမျးမှ ဘကွီးတျောမငျး၏ မိဖုရားခေါငျကွီး မယျနုအုတျကြောငျးကို ခပျပပြ မွငျရသညျ။
အိမျခွေ ၄၀၀ ခနျ့ရှိသော ဒေါငျးမကြေးရှာသညျ နှဈပေါငျးမြားစှာ မွနျမာထုံးစံဖွငျ့ ရှပှေားစက်ကူခတျ လုပျငနျး လုပျကိုငျနသေော ရှာဖွဈပွီး ထိုရှာအနီးသို့ ရောကျသှားပါက အကျကှဲနသေညျ့ လငျကှငျးခမျြးကို စညျးခကျြညီညီ ခပျသှကျသှကျ ရိုကျခတျ လိုကျသောအခါ ထှကျပျေါလာသော အသံကဲ့သို့ “တုတျ . . . ခနျြ့၊ တုတျ . . . ခနျြ့၊ တုတျ . . . ခနျြ့”ဟု အသံကို ကွားရမညျ ဖွဈသညျ။
ယငျးအသံမြားသညျ အခြို့သော နအေိမျ ခွံဝငျးမြား အတှငျး မွကေငျြး တူး၍ ဆောကျလုပျထားသော မွတေိုကျခနျး အတှငျးမှ အဆကျမပွတျ ထှကျပျေါလာနခွေငျး ဖွဈသညျ။
ဝါးစက်ကူရိုကျသညျ့ မွတေိုကျခနျးမြားကို အပွငျမှ လှမျးကွညျ့လိုကျပါက သုံးပခေနျ့ အကယျြရှိသော အဝငျတံခါးပေါကျ၌ မွတေိုကျခနျး အတှငျးသို့ မမွငျနိုငျစရေနျ အဝတျစ သို့မဟုတျ ဝါညဈညဈ အရောငျ ရှိသော ပလတျစတဈ အထူစမြားဖွငျ့ ကာရံထားသညျကို တှရေ့သညျ။
မွတေိုကျခနျးသညျ အနကျ ခုနဈပဝေနျးကငျြခနျ့ ရှိပွီး အလြား ၁၀ ပခေနျ့၊ အနံ ၆ ပခေနျ့ ရှိမညျ ထငျရသော ထောငျ့မှနျစတုဂံပုံသဏ်ဌနျ ဖှဲ့စညျးထားသညျ။
ထိုမွတေိုကျခနျး အတှငျးသို့ အုတျလှကေား သို့မဟုတျ မွသေားဖွငျ့ပငျ လှကေားပုံစံ ဖျောထားသညျ့ နရောမှ ဆငျး၍ သှားရသညျ။
ထိုမွတေိုကျခနျး အတှငျးသို့ အခှငျ့မရှိပါက အမြိုးသားမြား ဝငျရောကျခှငျ့ မရှိပေ။
မွတေိုကျခနျးမြား အတှငျး၌ ဒသေခံ အမြိုးသမီးငယျ မြားသညျ မွနျမာ့ရိုးရာ ရှပှေားစက်ကူတဈရှကျ ရရနျ နောကျဆုံး အဆငျ့ဖွဈသော ဝါးစက်ကူအစို ဒါမှမဟုတျ အခွောကျကို ကွေးဝါတုံးပျေါ တငျ၍ နသေောကွောငျ့ “တုတျ . . . ခနျြ့၊ တုတျ . . . ခနျြ့၊ တုတျ . . . ခနျြ့ဟူသော” အသံမြား ထှကျပျေါလာရခွငျး ဖွဈကွောငျး ဒေါငျးမကြေးရှာရှိ ဝငျးဝငျးနု ရှပှေား (ဝါးစက်ကူ) လုပျငနျးပိုငျရှငျ ဒျေါဝငျးဝငျးနုက ပွောပွသညျ။
ဝါးစက်ကူ ရိုကျနသေော အမြိုးသမီးငယျ (အလုပျသမ) မြားသညျ မွတေိုကျခနျး၏အပူရှိနျနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျမှ ထှကျသော အပူငှတေို့ ပေါငျးစပျ၍ ဖွဈပျေါလာသညျ့ ပူအိုကျမှုဒဏျကို သကျသာစရေနျ ကိုယျခန်ဓာ အပျေါပိုငျးရှိ အဝတျအစားမြားကို ခြှတျ၍ လုပျကိုငျ နကွေသောကွောငျ့ အမြိုးသားမြား ဝငျရောကျခှငျ့ မရှိခွငျး ဖွဈကွောငျးလညျး ရှငျးပွသညျ။
“လုံးဝ ဝငျလို့မရတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဧညျ့သညျက လာလလေ့ာခငျြလို့ ဟေ့ . . . လို့ အပွငျကနေ အျောလိုကျရငျ အထဲမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ မိနျးကလေးတှကေ အဝတျအစား ပွနျပွငျဆငျ ဝတျရတာပေါ့” ဟု ဒျေါဝငျးဝငျးနုက ရယျသံသဲ့သဲ့ဖွငျ့ ဆိုသညျ။
အိမျခွေ ၃၈၀ ရှိသော ဒေါငျးမကြေးရှာတှငျ ရှပှေားစက်ကူ လုပျငနျးကို အစအဆုံး လုပျကိုငျကွသညျ့ လုပျငနျးရှငျ ခွောကျဦးရှိပွီး မွတေိုကျခနျး အရအေတှကျ ၂၀ ခနျ့တှငျ ဒသေခံ အမြိုးသမီးငယျ တဈရာခနျ့ လုပျကိုငျနကွေောငျး ပွောပွသညျ။
ဒျေါဝငျးဝငျးနု၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ သူပိုငျဆိုငျသညျ့ ဝငျးသိင်ျဂီ မွတေိုကျခနျးအဆငျး အုတျလှကေားမြားကို ကြျောဖွတျကာ အဝငျတံခါးဝတှငျ ကာရံထားသညျ့ ပလတျစတဈ အစမြားကို ဖယျရှား၍ အတှငျးပိုငျးသို့ ကွညျ့လိုကျသောအခါ အလြား ၁၀ ပခေနျ့၊ အနံ ၆ ပခေနျ့နှငျ့ အမွငျ့ ၆ ပကြေျောရှိမညျ ထငျရသော ထောငျ့မှနျစတုဂံပုံသဏ်ဌနျ အခနျးဖှဲ့စညျးမှုနှငျ့ စက်ကူရိုကျနသေညျ့ အမြိုးသမီးငယျအခြို့ကို မွငျတှလေို့ကျရသညျ။
စက်ကူရိုကျလုပျငနျးခှငျကို ဝငျရောကျ လလေ့ာ လိုသောကွောငျ့ ခွလှေမျးမြားကို ရှသေို့တိုး၍ မွတေိုကျခနျး အတှငျးသို့ လှမျးဝငျလိုကျပါက အပွငျမှာ ရှိသညျ့ အပူခြိနျထကျ သာလှနျသော အခနျးအပူရှိနျ ခပျငှငှေ့ေ့၏ ဆီးကွိုခွငျးကို ခံလိုကျရသညျ။
ဧရာဝတီမွဈနှငျ့နီးသျောလညျး အညာဒသေ ဖွဈသောကွောငျ့ အပူရှိနျ မွငျ့မားသောနရော ဒသေဖွဈသညျ။ နှကောလမြားတှငျ မွတေိုကျခနျး အပူခြိနျမှ ၄၀ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျ အထကျတှငျ ရှိနနေိုငျသညျ။
ထိုအပူခြိနျအောကျတှငျ အမြိုးသမီးငယျမြားသညျ ဘယျညာလကျအစုံတှငျ အဝနှဈလကျမခနျ့နှငျ့ အရှညျတဈထောငျကြျောရှိ ဒနျး (ရငေတျသား) တို့ဖွငျ့ ကွေးဝါတုံး မကျြနှာပွငျပျေါတှငျ တငျထားသော ဝါညိုရောငျ အဆငျးရှိ လေးလကျမပတျလညျ ဝါးစက်ကူကို အခြိနျအဆ မှနျစှာဖွငျ့ ကွကျခွခေတျပုံစံ ခပျသှကျသှကျ ထုရိုကျလကျြ ရှိသညျ။
“မိနျးမပြိုလေးတှေ ကိုယျ့ရပျကိုယျ့ရှာမှာ အိုးမကှာ အိမျမကှာ လုပျလို့ရတဲ့ ရိုးရာ လကျမှုလုပျငနျး တဈခုပေါ့”ဟု ကြေးရှာဥက်ကဋ်ဌ ဦးညှနျ့ဝကေ သူ၏ အမွငျကို ဖှငျ့ဆိုသညျ။
အမြိုးသမီးငယျ ၁၀ ဦးအထိ လုပျငနျးခှငျဝငျကာ လုပျကိုငျနိုငျသညျ့ အကယျြအဝနျးရှိသော မွတေိုကျခနျး အတှငျး လှောငျပိတျလကျြရှိသော အပူငှကွေ့ောငျ့ စက်ကူရိုကျနသေညျ့ အမြိုးသမီးငယျလေးမြား၏ မကျြနှာပွငျပျေါတှငျ ခြှေးစကျခြှေးပေါကျမြား တဈလိမျ့ခငျြး စီးကနြသေညျကို တှရေ့သညျ။
ဧညျ့သညျအခြို့ ဝငျရောကျလလေ့ာမညျကို ကွိုသိထားသောကွောငျ့ မကွာခငျကပငျ ပွနျလညျ ဝတျထားသော အင်ျကြီမြားမှာလညျး ခြှေးစကျမြားကွောငျ့ မိုးရေ ထိထားသညျ့နှယျ နရောအခြို့တှငျ စိုစှတျလကျြပငျ ရှိနသေညျ။
အမြိုးသမီး အမြားစု ရှိနသေော မွတေိုကျခနျး အတှငျးသို့ ဒသေခံ အမြိုးသားမြား ဝငျရောကျခွငျး မရှိသလို ဧညျ့သညျမြား အနနှေငျ့ ဝငျရောကျ လလေ့ာလိုပါက ပိုငျရှငျထံတှငျ ခှငျ့တောငျးရကွောငျး ယငျးနရောသို့ လိုကျလံ ပွသပေးသညျ့ ဒသေခံ မိနျးမပြို တဈဦးက ပွောပွသညျ။
စက်ကူရိုကျ အမြိုးသမီးငယျလေးမြား လုပျငနျးခှငျ အတှငျး အပူဒဏျကို အနျတု လုပျကိုငျနကွေရသညျ့ ပကတိ အနအေထားကို ကြေးတောသူပီပီ စကားကို သှယျဝိုကျမနဘေဲ ရိုးရှငျးစှာ ဆကျပွောလိုကျသညျက “နကေလညျးပူ၊ လူကလညျးမြားရငျ အထဲမှာ တအားပူတယျ။ မိနျးမခငျြး ဆိုတော့လညျး မရှကျတော့ဘူး။ အပျေါက အဝတျအစားတှေ ခြှတျရိုကျရတာ”ဟူ၍ပငျ။
အဆငျ့ဆငျ့ လုပျဆောငျခဲ့သော ဝါးစက်ကူမြားအား မွတေိုကျခနျးက ထှကျသော အပူဓာတျနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျမှ ထှကျသော ကိုယျအပူခြိနျတို့ဖွငျ့ ပေါငျးခံ၍ ဒနျးသားဖွငျ့ စနဈတကြ ထုရိုကျမှသာ ရှဆေိုငျးခတျသညျ့အခါ အသုံးပွုနိုငျသညျ့ ရှပှေားစက်ကူမြား ရသညျဟု ရှပှေားစက်ကူ ပညာရပျကို လလေ့ာနသေညျ့ မန်တလေး ဒသေခံတဈဦးက ဆိုသညျ။
ဘုရား၊ စတေီပုထိုးမြားတှငျ ကပျလှူသော ရှဆေိုငျးမြား ရရှိလာစရေနျ ရှခေတျ (ထုရိုကျ) သောအခါ ရှပှေားစက်ကူကို မဖွဈမနေ ထညျ့သှငျး အသုံးပွုရသညျ။
ရှခေတျရာတှငျ ကိုးပေါငျတူဖွငျ့ ထုနှကျမှုဒဏျကို ခံနိုငျသော မွနျမာ့ရိုးရာ ရှပှေားစက်ကူမြားသညျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဒေါငျးမကြေးရှာ တဈရှာတညျးကသာ ထှကျရှိကွောငျး မန်တလေးမွို့မကျြပါးရပျရှိ ရှခေတျ ဆရာမြားထံမှ သိရသညျ။
ရှခေတျရာတှငျအသုံးပွုသော အကွမျးခံ ကောငျးမှနျသော ရှပှေားစက်ကူ (ချေါ) ဝါးစက်ကူ တဈရှကျ ရရှိရနျ အဆငျ့ဆငျ့ လုပျဆောငျရသညျ့ အခြိနျ ကာလသညျ သုံးနှဈကြျော ကွာမွငျ့သညျဟု ဆိုသညျ။
ရှပှေားစက်ကူ ရရှိလာစရေနျ ပထမအဆငျ့ အနနှေငျ့ ထှနျဆံဝါးကို စဉျ့အိုးမြားတှငျ ပေါငျးထားရပွီး ပေါငျးခံထားသောဝါးကို ကွိတျခါ ရရှိလာသော ကွိတျဖတျမြားအား နယျခွငျး၊ အခွောကျလှနျးခွငျး၊ မွတေိုကျခနျးတှငျ စက်ကူအစို ရိုကျခွငျးနှငျ့ စက်ကူအခွောကျ ရိုကျခွငျး အစရှိသော လုပျငနျးမြားကို အဆငျ့ဆငျ့ လုပျဆောငျရခွငျး ဖွဈသညျ။
ရှပှေား စက်ကူမြားသညျ အသနျ့အရှငျး အလှနျ ကွိုကျသော စက်ကူလေးမြားလညျး ဖွဈသညျ။
မွတေိုကျခနျး အတှငျးသို့ ဝငျ၍ စက်ကူရိုကျမညျ့ အမြိုးသမီးငယျမြားသညျ ကိုယျလကျသနျ့စငျပွီးမှသာ မွတေိုကျခနျးသို့ ဝငျရောကျလုပျကိုငျရသညျဟု ဒျေါဝငျးဝငျးနုက ပွောပွသညျ။
ခန်ဓာကိုယျ၌ ကပျငွိပါလာနိုငျသော ဖုနျ၊ သဲမြားနှငျ့ အလုပျလုပျနရေငျး ကြှတျကြ ဆံပငျခွညျ တဈမြှငျမြှပငျ ဖွဈစေ ရှပှေားစက်ကူ၌ ကပျငွိပါသှားလြှငျ ရှခေတျရာတှငျ အဆငျမပွေ ဖွဈကာ ရှလှောမြား ပကျြစီးတတျသောကွောငျ့ ဂရုတစိုကျ ရှေးခယျြ၍ ရှဆေိုငျးပိုငျရှငျမြားထံ ရောငျးခပြေးရကွောငျးလညျး သူက ပွောဆိုသညျ။
ဝါးစက်ကူမြားကို မွတေိုကျခနျးမှနေ၍ အပွငျသို့ သယျယူသညျ့အခါ ပိတျသား အဝတျစဖွငျ့ စနဈတကြ ထုပျပိုးခွငျးမရှိဘဲ စက်ကူခညျြး အလှတျသာ ယူဆောငျခဲ့လြှငျ ပွငျပနဒေဏျ၊ လဒေဏျတို့ကွောငျ့ ဝါးစက်ကူရှကျမြားမှာကြုံ့၍ သေးငယျ သှားတတျကွောငျးလညျး ဒျေါဝငျးဝငျးနုက ထပျမံ ရှငျးပွသညျ။
ရှပှေားစက်ကူလုပျငနျးကို ဒေါငျးမကြေးရှာတှငျ လုပျကိုငျလာသညျမှာ နှဈပေါငျး ၅၀ ကြျော ကွာမွငျ့ခဲ့ပွီ ဖွဈကွောငျး ဒသေခံမြား အဆိုအရ သိရသညျ။
စက်ကူရိုကျလုပျငနျးတှငျ ပါဝငျလုပျကိုငျသူ အမြားစုမှာ ကြေးရှာအတှငျးရှိ မိနျးမပြိုမြားသာ ဖွဈပွီး အိမျထောငျရှငျမြား ဝငျရောကျ လုပျကိုငျသူ နညျးကွောငျး ဒေါငျးမကြေးရှာ ဒသေခံ တဈဦးဖွဈသူ မဝငျးဝငျးမွငျ့က ၂ နှဈသားအရှယျ သမီးငယျ ပှခြေီ့ရငျး အခုလို ရှငျးပွခဲ့သေးသညျ။
“ဒီလုပျငနျးက တဈနကေုနျ အခြိနျပေး လုပျရတာ။ အိမျကိစ်စတဈဖကျ၊ ကလေးတဈဖကျနဲ့ဆို အဆငျမပွဘေူး။ ကလေးကို အထဲ ချေါသှားဖို့ကလညျး အဆငျမပွဘေူးလေ။ ကလေးက တဈဖကျနဲ့ဆိုတော့ မဝငျဖွဈတော့ဘူး”ဟူ၍ပငျ။
ရှပှေားစက်ကူအစို၊ အခွောကျတဈရှကျရိုကျခမှာ ၁၂၀ ကပျြရရှိပွီး တဈနကေုနျ အလုပျဝငျလြှငျ ရှကျရေ ၇၀ ခနျ့ ပွီးစီးသောကွောငျ့ တဈရကျလြှငျ ကပျြ ၈၀၀၀ ခနျ့ ဝငျငှေ ရရှိကွောငျး စက်ကူရိုကျ လုပျငနျးတှငျ ပါဝငျ လုပျကိုငျနသေူ မခဈြစုဝငျးက ပွောပွသညျ။
“တဈနကေုနျထိုငျပွီး ရိုကျနရေတော့ လကျတှလေညျး တအားနာတယျ။ တျောတျောကို ပငျပနျးတယျ”ဟု စက်ကူရိုကျရသညျ့ အတှအေ့ကွုံကို သူက မြှဝသေညျ။
အမြိုးသားတဈဦးတဈယောကျသညျ မသိ၍ဘဲဖွဈဖွဈ သိရကျနဲ့ဖွဈဖွဈ မွတေိုကျခနျးထဲသို့ ရုတျတရကျ ဝငျလာခဲ့လြှငျဆိုသညျ့ မေးခှနျးကို မေးမွနျးခဲ့သောအခါ “တဈခါမှလညျး ရှာမှာ အဲလိုဖွဈတာမကွားမိဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီထဲဝငျလာခဲ့ရငျ ဘာတှေ ဖွဈသှားမလဲ ဆိုတာ မပွောတတျဘူး”ဟု ပွောသညျ။
Crd The Voice Myanmar
အင်းဝ တစ်ဖက်ကမ်းမှ အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်း အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းခွင်
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ရှေးမြန်မာ မင်းဆက်များ၏ မင်းနေပြည်တော် အင်းဝမြို့ဟောင်း တစ်ဖက်ကမ်း ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းဘေးတွင် အမျိုးသမီးများ အထက်ပိုင်း ဗလာကျင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြသည့် လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခု ရှိနေသည်။
ထိုရွာမှ ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖြတ်ကျော်၍ လှမ်းကြည့်လိုက်သော် နိုင်ငံခြားသားများ လာရောက် လေ့လာရာ အင်းဝဘက်ကမ်းမှ ဘကြီးတော်မင်း၏ မိဖုရားခေါင်ကြီး မယ်နုအုတ်ကျောင်းကို ခပ်ပျပျ မြင်ရသည်။
အိမ်ခြေ ၄၀၀ ခန့်ရှိသော ဒေါင်းမကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာထုံးစံဖြင့် ရွှေပွားစက္ကူခတ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော ရွာဖြစ်ပြီး ထိုရွာအနီးသို့ ရောက်သွားပါက အက်ကွဲနေသည့် လင်ကွင်းချမ်းကို စည်းချက်ညီညီ ခပ်သွက်သွက် ရိုက်ခတ် လိုက်သောအခါ ထွက်ပေါ်လာသော အသံကဲ့သို့ “တုတ် . . . ချန့်၊ တုတ် . . . ချန့်၊ တုတ် . . . ချန့်”ဟု အသံကို ကြားရမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းအသံများသည် အချို့သော နေအိမ် ခြံဝင်းများ အတွင်း မြေကျင်း တူး၍ ဆောက်လုပ်ထားသော မြေတိုက်ခန်း အတွင်းမှ အဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်လာနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဝါးစက္ကူရိုက်သည့် မြေတိုက်ခန်းများကို အပြင်မှ လှမ်းကြည့်လိုက်ပါက သုံးပေခန့် အကျယ်ရှိသော အဝင်တံခါးပေါက်၌ မြေတိုက်ခန်း အတွင်းသို့ မမြင်နိုင်စေရန် အဝတ်စ သို့မဟုတ် ဝါညစ်ညစ် အရောင် ရှိသော ပလတ်စတစ် အထူစများဖြင့် ကာရံထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
မြေတိုက်ခန်းသည် အနက် ခုနစ်ပေဝန်းကျင်ခန့် ရှိပြီး အလျား ၁၀ ပေခန့်၊ အနံ ၆ ပေခန့် ရှိမည် ထင်ရသော ထောင့်မှန်စတုဂံပုံသဏ္ဌန် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ထိုမြေတိုက်ခန်း အတွင်းသို့ အုတ်လှေကား သို့မဟုတ် မြေသားဖြင့်ပင် လှေကားပုံစံ ဖော်ထားသည့် နေရာမှ ဆင်း၍ သွားရသည်။
ထိုမြေတိုက်ခန်း အတွင်းသို့ အခွင့်မရှိပါက အမျိုးသားများ ဝင်ရောက်ခွင့် မရှိပေ။
မြေတိုက်ခန်းများ အတွင်း၌ ဒေသခံ အမျိုးသမီးငယ် များသည် မြန်မာ့ရိုးရာ ရွှေပွားစက္ကူတစ်ရွက် ရရန် နောက်ဆုံး အဆင့်ဖြစ်သော ဝါးစက္ကူအစို ဒါမှမဟုတ် အခြောက်ကို ကြေးဝါတုံးပေါ် တင်၍ နေသောကြောင့် “တုတ် . . . ချန့်၊ တုတ် . . . ချန့်၊ တုတ် . . . ချန့်ဟူသော” အသံများ ထွက်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေါင်းမကျေးရွာရှိ ဝင်းဝင်းနု ရွှေပွား (ဝါးစက္ကူ) လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဒေါ်ဝင်းဝင်းနုက ပြောပြသည်။
ဝါးစက္ကူ ရိုက်နေသော အမျိုးသမီးငယ် (အလုပ်သမ) များသည် မြေတိုက်ခန်း၏အပူရှိန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော အပူငွေ့တို့ ပေါင်းစပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပူအိုက်မှုဒဏ်ကို သက်သာစေရန် ကိုယ်ခန္ဓာ အပေါ်ပိုင်းရှိ အဝတ်အစားများကို ချွတ်၍ လုပ်ကိုင် နေကြသောကြောင့် အမျိုးသားများ ဝင်ရောက်ခွင့် မရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှင်းပြသည်။
“လုံးဝ ဝင်လို့မရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဧည့်သည်က လာလေ့လာချင်လို့ ဟေ့ . . . လို့ အပြင်ကနေ အော်လိုက်ရင် အထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အဝတ်အစား ပြန်ပြင်ဆင် ဝတ်ရတာပေါ့” ဟု ဒေါ်ဝင်းဝင်းနုက ရယ်သံသဲ့သဲ့ဖြင့် ဆိုသည်။
အိမ်ခြေ ၃၈၀ ရှိသော ဒေါင်းမကျေးရွာတွင် ရွှေပွားစက္ကူ လုပ်ငန်းကို အစအဆုံး လုပ်ကိုင်ကြသည့် လုပ်ငန်းရှင် ခြောက်ဦးရှိပြီး မြေတိုက်ခန်း အရေအတွက် ၂၀ ခန့်တွင် ဒေသခံ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ရာခန့် လုပ်ကိုင်နေကြောင်း ပြောပြသည်။
ဒေါ်ဝင်းဝင်းနု၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သူပိုင်ဆိုင်သည့် ဝင်းသိင်္ဂီ မြေတိုက်ခန်းအဆင်း အုတ်လှေကားများကို ကျော်ဖြတ်ကာ အဝင်တံခါးဝတွင် ကာရံထားသည့် ပလတ်စတစ် အစများကို ဖယ်ရှား၍ အတွင်းပိုင်းသို့ ကြည့်လိုက်သောအခါ အလျား ၁၀ ပေခန့်၊ အနံ ၆ ပေခန့်နှင့် အမြင့် ၆ ပေကျော်ရှိမည် ထင်ရသော ထောင့်မှန်စတုဂံပုံသဏ္ဌန် အခန်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့် စက္ကူရိုက်နေသည့် အမျိုးသမီးငယ်အချို့ကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။
စက္ကူရိုက်လုပ်ငန်းခွင်ကို ဝင်ရောက် လေ့လာ လိုသောကြောင့် ခြေလှမ်းများကို ရှေ့သို့တိုး၍ မြေတိုက်ခန်း အတွင်းသို့ လှမ်းဝင်လိုက်ပါက အပြင်မှာ ရှိသည့် အပူချိန်ထက် သာလွန်သော အခန်းအပူရှိန် ခပ်ငွေ့ငွေ့၏ ဆီးကြိုခြင်းကို ခံလိုက်ရသည်။
ဧရာဝတီမြစ်နှင့်နီးသော်လည်း အညာဒေသ ဖြစ်သောကြောင့် အပူရှိန် မြင့်မားသောနေရာ ဒေသဖြစ်သည်။ နွေကာလများတွင် မြေတိုက်ခန်း အပူချိန်မှ ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အထက်တွင် ရှိနေနိုင်သည်။
ထိုအပူချိန်အောက်တွင် အမျိုးသမီးငယ်များသည် ဘယ်ညာလက်အစုံတွင် အဝနှစ်လက်မခန့်နှင့် အရှည်တစ်ထောင်ကျော်ရှိ ဒန်း (ရေငတ်သား) တို့ဖြင့် ကြေးဝါတုံး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တင်ထားသော ဝါညိုရောင် အဆင်းရှိ လေးလက်မပတ်လည် ဝါးစက္ကူကို အချိန်အဆ မှန်စွာဖြင့် ကြက်ခြေခတ်ပုံစံ ခပ်သွက်သွက် ထုရိုက်လျက် ရှိသည်။
“မိန်းမပျိုလေးတွေ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာမှာ အိုးမကွာ အိမ်မကွာ လုပ်လို့ရတဲ့ ရိုးရာ လက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုပေါ့”ဟု ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်ဝေက သူ၏ အမြင်ကို ဖွင့်ဆိုသည်။
အမျိုးသမီးငယ် ၁၀ ဦးအထိ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကာ လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေတိုက်ခန်း အတွင်း လှောင်ပိတ်လျက်ရှိသော အပူငွေ့ကြောင့် စက္ကူရိုက်နေသည့် အမျိုးသမီးငယ်လေးများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ချွေးစက်ချွေးပေါက်များ တစ်လိမ့်ချင်း စီးကျနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဧည့်သည်အချို့ ဝင်ရောက်လေ့လာမည်ကို ကြိုသိထားသောကြောင့် မကြာခင်ကပင် ပြန်လည် ဝတ်ထားသော အင်္ကျီများမှာလည်း ချွေးစက်များကြောင့် မိုးရေ ထိထားသည့်နှယ် နေရာအချို့တွင် စိုစွတ်လျက်ပင် ရှိနေသည်။
အမျိုးသမီး အများစု ရှိနေသော မြေတိုက်ခန်း အတွင်းသို့ ဒေသခံ အမျိုးသားများ ဝင်ရောက်ခြင်း မရှိသလို ဧည့်သည်များ အနေနှင့် ဝင်ရောက် လေ့လာလိုပါက ပိုင်ရှင်ထံတွင် ခွင့်တောင်းရကြောင်း ယင်းနေရာသို့ လိုက်လံ ပြသပေးသည့် ဒေသခံ မိန်းမပျို တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
စက္ကူရိုက် အမျိုးသမီးငယ်လေးများ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း အပူဒဏ်ကို အန်တု လုပ်ကိုင်နေကြရသည့် ပကတိ အနေအထားကို ကျေးတောသူပီပီ စကားကို သွယ်ဝိုက်မနေဘဲ ရိုးရှင်းစွာ ဆက်ပြောလိုက်သည်က “နေကလည်းပူ၊ လူကလည်းများရင် အထဲမှာ တအားပူတယ်။ မိန်းမချင်း ဆိုတော့လည်း မရှက်တော့ဘူး။ အပေါ်က အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ရိုက်ရတာ”ဟူ၍ပင်။
အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဝါးစက္ကူများအား မြေတိုက်ခန်းက ထွက်သော အပူဓာတ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော ကိုယ်အပူချိန်တို့ဖြင့် ပေါင်းခံ၍ ဒန်းသားဖြင့် စနစ်တကျ ထုရိုက်မှသာ ရွှေဆိုင်းခတ်သည့်အခါ အသုံးပြုနိုင်သည့် ရွှေပွားစက္ကူများ ရသည်ဟု ရွှေပွားစက္ကူ ပညာရပ်ကို လေ့လာနေသည့် မန္တလေး ဒေသခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ဘုရား၊ စေတီပုထိုးများတွင် ကပ်လှူသော ရွှေဆိုင်းများ ရရှိလာစေရန် ရွှေခတ် (ထုရိုက်) သောအခါ ရွှေပွားစက္ကူကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်း အသုံးပြုရသည်။
ရွှေခတ်ရာတွင် ကိုးပေါင်တူဖြင့် ထုနှက်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်သော မြန်မာ့ရိုးရာ ရွှေပွားစက္ကူများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေါင်းမကျေးရွာ တစ်ရွာတည်းကသာ ထွက်ရှိကြောင်း မန္တလေးမြို့မျက်ပါးရပ်ရှိ ရွှေခတ် ဆရာများထံမှ သိရသည်။
ရွှေခတ်ရာတွင်အသုံးပြုသော အကြမ်းခံ ကောင်းမွန်သော ရွှေပွားစက္ကူ (ခေါ်) ဝါးစက္ကူ တစ်ရွက် ရရှိရန် အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရသည့် အချိန် ကာလသည် သုံးနှစ်ကျော် ကြာမြင့်သည်ဟု ဆိုသည်။
ရွှေပွားစက္ကူ ရရှိလာစေရန် ပထမအဆင့် အနေနှင့် ထွန်ဆံဝါးကို စဥ့်အိုးများတွင် ပေါင်းထားရပြီး ပေါင်းခံထားသောဝါးကို ကြိတ်ခါ ရရှိလာသော ကြိတ်ဖတ်များအား နယ်ခြင်း၊ အခြောက်လှန်းခြင်း၊ မြေတိုက်ခန်းတွင် စက္ကူအစို ရိုက်ခြင်းနှင့် စက္ကူအခြောက် ရိုက်ခြင်း အစရှိသော လုပ်ငန်းများကို အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ရွှေပွား စက္ကူများသည် အသန့်အရှင်း အလွန် ကြိုက်သော စက္ကူလေးများလည်း ဖြစ်သည်။
မြေတိုက်ခန်း အတွင်းသို့ ဝင်၍ စက္ကူရိုက်မည့် အမျိုးသမီးငယ်များသည် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးမှသာ မြေတိုက်ခန်းသို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်ဟု ဒေါ်ဝင်းဝင်းနုက ပြောပြသည်။
ခန္ဓာကိုယ်၌ ကပ်ငြိပါလာနိုင်သော ဖုန်၊ သဲများနှင့် အလုပ်လုပ်နေရင်း ကျွတ်ကျ ဆံပင်ခြည် တစ်မျှင်မျှပင် ဖြစ်စေ ရွှေပွားစက္ကူ၌ ကပ်ငြိပါသွားလျှင် ရွှေခတ်ရာတွင် အဆင်မပြေ ဖြစ်ကာ ရွှေလွှာများ ပျက်စီးတတ်သောကြောင့် ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်၍ ရွှေဆိုင်းပိုင်ရှင်များထံ ရောင်းချပေးရကြောင်းလည်း သူက ပြောဆိုသည်။
ဝါးစက္ကူများကို မြေတိုက်ခန်းမှနေ၍ အပြင်သို့ သယ်ယူသည့်အခါ ပိတ်သား အဝတ်စဖြင့် စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးခြင်းမရှိဘဲ စက္ကူချည်း အလွတ်သာ ယူဆောင်ခဲ့လျှင် ပြင်ပနေဒဏ်၊ လေဒဏ်တို့ကြောင့် ဝါးစက္ကူရွက်များမှာကျုံ့၍ သေးငယ် သွားတတ်ကြောင်းလည်း ဒေါ်ဝင်းဝင်းနုက ထပ်မံ ရှင်းပြသည်။
ရွှေပွားစက္ကူလုပ်ငန်းကို ဒေါင်းမကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်လာသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ အဆိုအရ သိရသည်။
စက္ကူရိုက်လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သူ အများစုမှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိန်းမပျိုများသာ ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ရှင်များ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်သူ နည်းကြောင်း ဒေါင်းမကျေးရွာ ဒေသခံ တစ်ဦးဖြစ်သူ မဝင်းဝင်းမြင့်က ၂ နှစ်သားအရွယ် သမီးငယ် ပွေ့ချီရင်း အခုလို ရှင်းပြခဲ့သေးသည်။
“ဒီလုပ်ငန်းက တစ်နေကုန် အချိန်ပေး လုပ်ရတာ။ အိမ်ကိစ္စတစ်ဖက်၊ ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဆို အဆင်မပြေဘူး။ ကလေးကို အထဲ ခေါ်သွားဖို့ကလည်း အဆင်မပြေဘူးလေ။ ကလေးက တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ မဝင်ဖြစ်တော့ဘူး”ဟူ၍ပင်။
ရွှေပွားစက္ကူအစို၊ အခြောက်တစ်ရွက်ရိုက်ခမှာ ၁၂၀ ကျပ်ရရှိပြီး တစ်နေကုန် အလုပ်ဝင်လျှင် ရွက်ရေ ၇၀ ခန့် ပြီးစီးသောကြောင့် တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၈၀၀၀ ခန့် ဝင်ငွေ ရရှိကြောင်း စက္ကူရိုက် လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင် လုပ်ကိုင်နေသူ မချစ်စုဝင်းက ပြောပြသည်။
“တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး ရိုက်နေရတော့ လက်တွေလည်း တအားနာတယ်။ တော်တော်ကို ပင်ပန်းတယ်”ဟု စက္ကူရိုက်ရသည့် အတွေ့အကြုံကို သူက မျှဝေသည်။
အမျိုးသားတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မသိ၍ဘဲဖြစ်ဖြစ် သိရက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် မြေတိုက်ခန်းထဲသို့ ရုတ်တရက် ဝင်လာခဲ့လျှင်ဆိုသည့် မေးခွန်းကို မေးမြန်းခဲ့သောအခါ “တစ်ခါမှလည်း ရွာမှာ အဲလိုဖြစ်တာမကြားမိဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီထဲဝင်လာခဲ့ရင် ဘာတွေ ဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာ မပြောတတ်ဘူး”ဟု ပြောသည်။
Be the first to comment on "အပျေါပိုငျးဗလာကငျြး အမြိုးသမီးမြား၏ လုပျငနျးခှငျ"
အံ့ဩသငျ့စရာ‌ ကောငျးလောကျအောငျ မိကြောငျးကွီးတဈကောငျကို အသာလေး မွိုခခြဲ့တဲ့ မွှကွေီးရဲ့ရုပျသံ
စားဦး စားဖြားမဟုတျပဲ အကနျြအကွှငျးကို ရဟနျး သာမဏတေို့အား လှူသငျ့ပါသလား